Ny Seal fizahan-tany Safer vaovao tsotra no lakilen'ny famerenan'ny mpitsidika azy ireo hiverina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny Seal fizahan-tany Safer vaovao tsotra no lakilen'ny famerenan'ny mpitsidika azy ireo hiverina
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • fampiasam-bola • LGBTQ • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tombo-kase fizahan-tany azo antoka
Tsotra, mahomby ary tsy manam-paharoa izy io. Ny fandefasana indray ny Programme Seal Tourism Seal avy amin'ny World Tourism Network. Manantena ny WTN fa ho lasa fenitra vaovao manerantany ny Safo Fizahan-tany momba ny fizahan-tany, amin'ny fitadiavana ireo toerana haleha, hotely, ary ireo mpiara-miombon'antoka hafa azo antoka ho an'ny mpitsidika.
Ny programa New Safer Tourism Seal nataon'ny World Tourism Network dia natomboka tamin'ny 1 Jolay. Najanona tamin'ny Janoary ny programa handinihana ny fandrahonana COVID-19 amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahantany.
Ny Seal Fizahan-tany Safer maintso, manga ary mena dia maneho ny tahan'ny vaksiny, ny takiana amin'ny andrana ary ny tahan'ny tranga. Manana ny fitaovana tsotra rehetra izy io ho tonga fenitra vaovao amin'ny fandrefesana iraisam-pirenena. Natao hamerenana ny raharaham-barotra sy hahazoana matoky ny mpandeha, ny toerana itodiana ary ny mpiasa.
Ny Seal momba ny fizahan-tany azo antoka ho an'ny toeran-kaleha sy ny mpandray anjara dia azo ampidirina ho an'ny mpikambana ao amin'ny World Tourism Network, ilay fikambanana ao ambadiky ny fanamboarana ny dia lavitra, manamora ny dinika manerantany voalohany momba ny COVID-19 miaraka amin'ireo mpiantsehatra sy toeram-pizahantany.
Ny fiarovana sy ny fiarovana ny dia dia miankina amin'ny mpamatsy sy ny mpandray ary mila fitarihana izany. Mahafantatra an'io zava-misy io, Famerenana indray ny dia no dinika eran-tany voalohany momba ny fandrahonana COVID-19.
Naorin'i eTurboNews, Fizahantany azo antoka kokoa, PATA, ny Birao fizahantany afrikanina, ary ny Birao fizahan-tany any Nepal eo amin'ny sisin'ny fampisehoana ITB Trade nofoanana tao Berlin tamin'ny 8 martsa 2020. Tsy nisy mihitsy ITB, fa ny fananganana sakafo maraina fitsangatsanganana no fiandohan'ny dinika maherin'ny 200+ zoom miaraka amin'ireo mpandray anjara manerantany.
Dr. Peter Tarlow na Safer Tourism dia nampitandrina momba ny krizy COVID-19 vao misondrotra amin'ny hetsika fandefasana Safer Travel tamina hafatra an-dahatsary tamin'ny febroary 2020.
Tamin'ny Desambra 2020, Fanarenana.travel namorona ny Tambajotra fizahan-tany Word (WTN), fikambanana tambajotram-pifandraisana misy mpikambana manodidina ny 1,500 amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any amin'ny firenena 127.
WTN no namorona ny Tombo-kase fizahan-tany azo antoka ho an'ny mpandray anjara amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ary ny fizahan-tany amin'ny volana jolay 2020. The Ny Birao Fizahan-tany any Jamaika no tanjona voalohany nahazo ny tombo-kase tamin'ny 9 Jolay 2020, arahin'ny Birao fizahan-tany any Kenya.
Rehefa Ny WTTC dia nanambara fa toerana zato mahery no nahazo ny tombo-kase fizahan-tany azo antoka an'ny fikambanana, nanapa-kevitra ny Tambajotra Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany taorian'ny namoronana azy hametraka ny Tombo-kase fizahan-tany azo antoka mangataha mangina mba hamela ny fahazoana mazava kokoa momba ny COVID-19 sy ny loza mitatao amin'ny mpitsidika sy ny indostrian'ny fizahantany.
Tamin'ny fanolorana ny programa fanaovana vaksiny, sy ny firaketana an-tsary ny fizahantany mivoaka amin'ny tsena lehibe ao anatin'izany i Hawaii, nanapa-kevitra ny Tambajotra Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany fa hamerina indray ny Seal Tourism Seal amin'ny 1 Jolay 2021, herintaona taorian'ny namoronana azy voalohany.
Ny filoha sy mpanorina ny WTN, Juergen Steinmetz, dia nilaza hoe: "Zava-dehibe ho antsika ny mamorona programa iray izay tena afaka mahazo fahatokisan-tena ho an'ny mpandeha, ny toeran-kaleha, ny mpiara-miasa ary ireo miasa amin'ity sehatra manerantany ity.
“Tsy manana ny recourses izahay hanombanana tombana amin'ny antsipiriany. Heveriko fa ny WTTC Stamp dia nanao asa be tamin'ny fampifangaroana ny angon-drakitra antsipirihany ary nasain'ireo tompon'ireo hajia nanamarina ireo zavatra napetrany momba ny tanjon'izy ireo na ny orinasa, hahafahan'izy ireo mahazo ny fanohanan'ny WTTC. Noraisinay ho maodely ny programa Safe Travel an'i Hawaii, ary tsotra ny hafatray. Ny vaksiny, ny fitsapana ary ny fihanaky ny viriosy no isa azontsika refesina mora foana alohan'ny hanomezana ny Tombo-mason'ny Fizahantany azo antoka.
”Ny hajia WTTC sy ny tombo-kase WTN dia mifampiarahaba. Raha ny tokony ho izy dia ny orinasa rehetra manana ny fahazoany tombo-kase aloha dia tokony hampihatra ny hajia WTTC faharoa. Ny toerana aleha na orinasa rehetra mitondra ny hajia WTTC dia mety te-hangataka ny tombo-kasenay manaraka. Ny hafatra WTTC dia mifototra amin'ny antsipiriany momba ny orinasa na ny toerana halehany, mifantoka fotsiny amin'ny fanjakana sy valiny izahay ankehitriny.
“Izy io dia hiantoka ny fepetra takiana amin'ny fiasa amin'ny toerana azo antoka ankehitriny, alohan'ny hiasana amin'ny antsipiriany sy ny fanontana kely.
“Tokony hatoky isika fa izay mahazo ny tombokasenay dia tokony hamboly fizahan-tany manomboka izao. Azonao atao ny mametraka ny antsipiriany rehetra momba ny asan'ny hotely, fa rehefa mbola tsy azo antoka ny toerana halehanao dia tsy maninona izany rehetra izany.
“Amin'ny fahatongavan'ireo fizahan-tany isan'andro any Hawaii, dia avo kokoa izany raha oharina amin'ny andro tampony amin'ny taona 2019, na dia tsy nisy dia iraisam-pirenena aza dia hita ho maodelin'ny fahombiazana i Hawaii. Ny maodely Hawaii dia niaro ny olona rehetra tao amin'ny Fanjakana sy ireo mpitsidika.
“Mahafinaritra anay ny miantehitra amin'ity tantaran'ny fahombiazana ity any Hawaii ary ny fananana ireo hevi-dehibe amin'ilay maodelin'i Hawaii tafiditra ao anatin'ny takianay momba ny Seal Tourism Seal dia misy dikany betsaka. “
Ny Seal Tourism Seal (STS) dia miorina amin'ny fanamarinana efa napetraka amin'ny alàlan'ny fanombanana sy fanekena. Ny tombo-kase dia manome antoka fanampiny rehefa mandeha mandritra ireo fotoana tsy azo antoka ireo. Ny STS dia manampy ny toerana alehany sy ny mpiray antoka aminy amin'ny alàlan'ny lisitra fanamarihana isa marobe momba ny toe-javatra misy eo amin'ny toeran'ny orinasa misy anao.
Ny Seal fizahan-tany azo antoka dia azo zahana manokana ho an'ny mpikambana ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany. The Passeran'ny fizahan-tany azo antoka ho an'ny mpandeha, ny Loka mahery fo dia misy ihany koa ho an'ny rehetra.
Tsy mitovy amin'ny fanamafisana Seal na Stamp hafa, ny World Tourism Network Safer Tourism Seal dia manana fepetra tsotra mifototra amin'ny tahan'ny vaksiny, ny takiana amin'ny fanandramana, ny fanaovana sarontava, ny lalàna manalavitra ny fiaraha-monina ary ny isa voan'ny COVID ampiarahina amin'ny fanombanan-tena avy amin'ireo izay mangataka. Tombo-kase fizahan-tany azo antoka.
Manolotra tombokase telo ny WTN:
Tombo-kase fizahan-tany azo antoka kokoa
azo zahana amin'ny toeran-kaleha sy ny mpiara-miombon'antoka. Miorina tanteraka amin'ny fanombatombanana anao manokana sy amin'ny efatra amin'ny fepetra takiana farany ambany indrindra alehanao
1) 25% ny tahan'ny vaksinin'ny mponinao
2) Fitsapana COVID-19 ratsy na vaksiny ilaina amin'ny mpitsidika tonga
3) Ny tahan'ny tranga 7 andro isaky ny mponina 100,000 9 dia mila latsaky ny XNUMX eo ho eo isan'andro.
4) mitafy sarontava
5) Fanalavirana ny fiaraha-monina.
Tombo-kase fizahantany azo antoka kokoa
Ny fanombanana dia mifototra amin'ny fanombatombanana anao manokana sy amin'ny ONE amin'ireo scenario 2 manaraka ireto:
1) Ny toerana alehanao dia tsy maintsy manana tahan'ny vaksiny 50 +% amin'ny mponinao ary ny mpitsidika anao dia tsy maintsy mampiseho vaksiny feno na fitsapana COVID-19 ratsy alohan'ny hahatongavanao any amin'ny firenenao, fanjakana na faritrao ary ny tahan'ny tranga misy anao 7 andro isaky ny 100,000 mponina latsaky ny 7 isan'andro; manao saron-tava anatiny sy ny halaviran'ny fiaraha-monina
2) NA ny toerana alehanao dia tsy maintsy manana tahan'ny vaksiny 60 +% ary ny tahan'ny tranga 7 andro isaky ny mponina 100,000 5 dia mila latsaky ny XNUMX eo ho eo isan'andro
3) Fanalavirana ara-tsosialy
Tombo-kase momba ny fizahantany RED Safer
tombana sy ankatoavina:
Miorina amin'ny fanombatombanana nataonao manokana notohanan'ny manam-pahaizana momba ny fiarovana WTN sy ny mpikambana WTN ary ireto manaraka ireto:
1) Ny tanjonao dia mila manana tahan'ny vaksiny 70 +% amin'ny mponinao
2) tahan'ny tranga 7 andro isaky ny mponina 100,000 latsaky ny 3 isan'andro
Ny ekipa manam-pahaizana WTN dia afaka manitsy ny fepetra takiana amin'ny angon-drakitra tsy miankina sy fanombanana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Seal Tourism Seal, ary raha te hampihatra dia mankanesa any www.fioritourismseal.com